Xog Cusub oo Ka Soo Baxday Wiilal Laga Waayay Minnesota
Somalis in Minnesota: Barnaamijyo uu Radio MPR ka diyaariyay Soomaalida deggan Minnesota ka akhri halkan (English)
ka akhri halkan (English)
By Abdirahman Aynte , Washington, VOA, 17-June-2009
Warbixinta Cabdiraxman Caynte Dhegayso (MP3) ama Soo rogo (MP3)
Caabiya Ciise waxa ay xog ka bixisay in loo digay wiilasha qaar iyo waalidkood ka hor safarkooda
ISHA WARKA: VOA: (Waxaa warkan sidaas uu yahay u faafisay Idaacada Codka Maraykanka:)
Macluumaad horleh ayaa kasoo baxaya dhallinyaro Soomaali-Mareykan ah oo ka safray gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Dhallinyarada ayaa la rumeysan yahay inay Soomaaliya ugu socdaaleen si ay ugu biiraan kooxda al-Shabaab.
Haweeney Soomaali ah oo ka shaqeyneysay xafiis tigidhada lagu jaro, ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaadday in iyada, iyo maamulka masjid ay dhallinyaradu ku cibaadeysan jireen, ay u digeen qaar kamid ah waalidiinta wiilashaas, ka hor intii aaney dhallinyaradu u baqoolin Somalia.
Xogtan cusub ayaa ka hor imaaneysa eedeymo ay soo jeedin jireen qaar kamid ah qaraabada wiilasha Somalia aaday, oo aheyd in wiilashooda masjidka laga abaabulay.
Waa markii ugu horreysay ee ay soo baxdo caddeyn muujineysa in maamulka Masjidka Abubakar Assidique ee magaalada Minneapolis, uu qaaday iskuday uu ku baajinayo socdaalka dhallinyarada Soomaali-Mareykanka ah ee u dagaalka doontay Somalia.
Laamaha sirdoonka Mareykanka ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore, waxay wadeen baaritaan ay ugu kuur galayaan sida ay u dhoofeen labaatameeyo dhallinyaro Soomaali-Mareykan ah, oo la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab, oo uu Mareykanku u aqoonsan yahay inay tahay koox argagixiso ah, xiriirna la leedahay ururka al-Qaacida.
Qaar kamid ah qaraabada dhallinyaradaas ayaa ku eedeeyey maamulka Masjidka Abubakar Assidiiq, oo ah masjidka ugu weyn ee Soomaalida Mareykanka, inuu ka dambeeyey in dhallinyaradaasi ay Somalia u baqoolaan. Laakiin masjidka ayaa gaashaanka u daruuray eedeymahaas.
Ha yeeshee haweeney la yiraahdo Caabbiyo Cabdi, oo ka tirsan mutadawiciinta Masjidka, ayaa u sheegtay xeer-beegti ay dowladda Mareykanka u saartay baaritaanka arrintan, inay maamulka masjidka u sheegtay dhowr bilood kahor, in laba kamid ah dhallinyaradaas, oo la kala yiraahdo Max’ed Xasan Miski iyo Mustaf Cali Salaad, inay damacsan yihiin inay u dhoofaan Somalia. Dhallinyaradaas ayaa qiyaastii bil kaddib markii ay Cabbiyo soo sheegtay, waxay u dhoofeen Somalia, halkaas oo la rumeysan yahay inay ku biireen kooxda al-Shabaab.
Caabbiya ayaa sheegtay in xafiis ay ka shaqeyneysay ay ku aragtay laba wiil oo doonayey inay tigidho u goostaan Somalia. Waxay sheegtay in markiiba ay sawir ka sameysay baasaboorro Soomaali ah oo ay wateen, isla markaana in iyada iyo maamulka Masjidka Abubakar Assidique la xiriireen waalidka wiilashaas, lana wadaageen qorshaha wiilasha.
Maamulka Masjida Abubakar Assadique, ayaa VOA-da u xaqiijiyey in markii ay Caabiya soo sheegtay wiilasha, ay iyaguna markiiba la xiriireen waalidka wiilashaas, iyagoo waliba la wadaagay sawirka baasaboor Soomaali ah, oo la rumeysan yahay inuu ahaa mid been abuur ah.
Mid kamid ah dhallinyarada Somali-Mareykanka ah ee Somalia aaday, ayaa toddobaadkii hore ku dhintay Somalia, inkastoo aysan caddeyn duruufaha uu ku dhintay.
Xogta ku saabsan in maamulka masjidka Abubakar Assadique uu isku taxallujiyey inuu baajiyo wiilasha baxay, ayaa si weyn uga hor imaaneysa eedeymo ay si joogto ah usoo jeedin jireen qaar kamid ah qaraabada wiilasha Somalia ku maqan.
Mid kamid ah wiilasha Somali-Mareykanka ah ee Somalia u dagaalka doontay, oo magiciisa ku maldahay Abu Muslim, ayaa dhowr bilood kahor wareysi siiyey idaacad ku taalla magaalada Kismaayo, oo ay leedahay kooxda al-Shabaab. Wuxuu hoosta ka xarriiqay ineysan jirin cid soo marin-habaabisay, balse ay iyagu usoo jihaad-doonteen Somalia.
Mid kale kamid ah wiilashaas, oo la yiraahdo Shirwac Axmed, ayaa la sheegay inuu kamid ahaa naftii-hurayaal isku qarxiyey bartilmaameedyo ku yaalla Hargeysa iyo Boosaaso, bishii October iyo sanadkii hore.
Dowladda Mareykanka ayaa baaritaan adag ku wadda. Laanta sirdoonka ee FBI-da ayaa ka gaabsatay inay xaqiijiso wararka ku saabsan wiilasha Somalia u baqoolay, ha yeeshee waxay sheegtay inay ka warheyso inay Somalia aadeen.
Wararkii Hore ee Wiilasha Maqan Halkan ka akhri (Minneapolis)
ACTIVIST: Unclear how Somali teens left US - June 16, 2009
Death of Somali teen a mystery to Mpls. family
Feds investigating Twin Cities terrorist network
Mpls. Somali community reacts to terrorist reports